Indawo yaseCeará - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguGustavo
Indawo, ekumgama oziikhilomitha ezisi-7 ukusuka eDomingos Martins, kufutshane neVale da Estação, equlathe i-800m yendlela engagangathwanga kolu hambo, iyacetyiswa kusapho okanye amaqela ezihlobo ukuya kuthi ga kwi-8 yabantu (iibhedi ezi-2 eziphindwe kabini kunye neebhedi ezi-2). I-chalet ikulungele ukuchitha iintsuku ezizolileyo njengoko iphakathi kwamahlathi kunye neengxangxasi, equlethe iziqhamo ezifumanekayo kwiindwendwe. Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba amanzi endlwini avela ngokuthe ngqo entwasahlobo.
Endlwini, unokonwabela oko indalo inokukunika, ngokufikelela kwingxangxasi, imijelo, okanye nokuhamba okunempilo phakathi kwezityalo nemithi ukumangala ngombono ongalibalekiyo.
4.75 · Izimvo eziyi-53
I-800m ukusuka kwilali, apho kukho ivenkile yokutya ebonelela ngayo yonke into kunye nevenkile yokutyela eyenziwe ekhaya. Yimizuzu eyi-15 ukusuka eCervejaria Barba Ruiva kunye nemizuzu eyi-17 ukusuka kumbindi weDomingos Martins.
Umbuki zindwendwe ngu- Gustavo